Itekhnoloji kunye nabantu abadala | Iindaba zeGajethi
Itekhnoloji yeza kubomi bethu ixesha elithile eladlulayo ukuze ihlale ngokusisigxina, kwaye kwiimeko ezininzi isinceda kakhulu, nangona kwezinye ikwasibopha ngendlela ebalulekileyo. Ukusuka kwizixhobo eziphathwayo, kwii-headphone nakwiividiyo, itekhnoloji ingena kubomi bethu, nakubo bonke abantu abasingqongileyo.
Ngelishwa kwaye kwezinye iimeko obu buchwephesha abufikeleli kubo bonke abantu bubuhle bayo, kushiya, umzekelo, abantu abadala. Ngethamsanqa, sikwabona inani elikhulu lezixhobo ezijolise kweli qela labantu eliqhubeka nokukhula ngaphandle kokuyeka.
Uninzi lweefowuni eziphathwayo kwilizwe lethu zilibele ngabantu abadala, kwaye azisaboneleli ngesiphelo esithile. Oku kuye kwathetha ukuba ezinye iinkampani zibona ukubanakho ukufikelela kweli candelo, zijolise kwabo boomakhulu noomakhulu okanye oomakhulu abadinga isixhobo esiphathwayo, nangona zilungiselelwe iimfuno zabo.
Umzekelo ngu Iifowuni zabantu abadala okwethuba elithile ngoku bezithengisa izixhobo ezahlukeneyo, apho ifayile ye- Iifowuni eziphathwayo, ezenzelwe abo bantu badala, apho sonke siza kuthi sifike kwakamsinya okanye kamva. Ewe izixhobo zolu hlobo zinokufumaneka kwezinye iivenkile ezininzi, zombini ezibonakalayo kunye nezomzimba.
Emva koko siza kukubonisa izixhobo ezintathu ezijolise ngokukodwa kubantu abadala:
2 Yepzon Inye
3 I-Wolder mismar xenior
Ukuba ujonga isixhobo esilula kakhulu, nokuba sesakho okanye isihlobo sakho esidala, sinamaqhosha amakhulu kwaye esingazukufuna mizamo yokufunda indlela yokuyisebenzisa, ukhetho olukhulu kukukhetha I-Beafon SL140 ephezulu yeselfowuni, ekwanamaxabiso asezantsi angama-36.95 eeuros.
Isebenza ngokufana nayo nayiphi na into ephathekayo, nangona inemisebenzi encinci. Singayichaza njengefowuni kwaye sibhale kuba iya kusivumela ikakhulu ukuba senze kwaye samkele iifowuni kunye nemiyalezo ebhaliweyo.
Ngokuqinisekileyo igama lesi sixhobo alikuniki naluphi na umkhondo wento enokuba lingantoni ngayo, kodwa ilula ngu Indawo ye-GPS eya kusivumela ukuba sazi ngalo lonke ixesha isikhundla sezalamane zethu esele zikhulile. Inokuba luncedo kakhulu kubantu abanezifo ezithile, abathi ngamanye amaxesha badideke baphele belahleka.
Nge Yepzon Inye Ungajonga ngalo lonke ixesha, usebenzisa isixhobo esiphathwayo apho bakhoyo, ukuze xa ulahlekile ungabafumana ngokukhawuleza kwaye uphephe ukuqaqanjelwa okanye ukulinda kakhulu.
Ixabiso mhlawumbi lelona libalulekileyo kwaye uxolo lwengqondo oluya kusinika lona luya kuba phezulu kunalo naliphi na ixabiso lemali.
I-Wolder mismar xenior
Enye yeendlela ezilungileyo zokuzama ukukholisa umntu osele ekhulile ukuba asebenzise isixhobo sobuchwephesha ngokunikela ngayo, umzekelo, enye yezona zixhaphakileyo njenge-smartphone. Okwangoku, azikho kangako izixhobo ezikwimarike ezinikezelwe kuphela kubantu abadala.
Umzekelo, kwaye mhlawumbi okona kulungileyo, ngu Wolder Mismart Xenior, I-smartphone iphuhliselwe ngokupheleleyo abantu abakwiminyaka yobudala kwaye ungathenga nje ii-euro ezingama-60.
Ezi zixhobo zintathu zisenokungafuneki ngalo mzuzu, ngokuqinisekileyo ziindaba ezimnandi, kodwa ungalibali eli nqaku kunye nezindululo esizenzileyo namhlanje kwaye mhlawumbi namhlanje ngamanye amalungu osapho lwakho ayalifuna, kodwa kwakamsinya okanye kamva sonke okanye phantse sonke siyakuphela sifuna esinye sezi zixhobo.
Ngaba ucinga ukuba kufanelekile ukuba kubekho izixhobo zolu hlobo ezikhoyo kwintengiso yabantu abadala?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Itekhnoloji kunye nabantu abadala
Iingxaki ezinzulu ekuthengisweni kwakhona kweePixels ngaphakathi kweProjekthi Fi